Ampidino Cure Master! APK ho an'ny Android
Ampidino Cure Master!
Ampidino Cure Master!,
Manasitrana Tompoko! Lalao simulation mahafinaritra sy mahaliana izy io. Aminity lalao ity dia ho profesora aminny hopitaly ianao ary hiasa mafy hanasitranana aretina maro tsy sitrana! Aminny lalao; Betsaka ny aretina mahaliana sy hafahafa toy ny loha lehibe, fiankinan-doha aminny finday, fiankinan-doha aminny anime. Hositraninao ireo marary ireo aminny fomba farany farany.
Manamboara hopitaly anao manokana, mitady fomba hanasitranana karazana aretina hafahafa, hitantana mpitsabo isan-karazany mandra-pahatonga ny hopitaly ho tsara indrindra eto an-tany. Misy ihany koa hetsika hafahafa samihafa miandry anao hamaha ao aminny Cure Master! Tsy mora izany mihazakazaka hopitaly izany.
Mila mividy fitaovana samihafa ianao hanampiana karazana marary. Omeo serivisy mety kokoa hahazoana laza ianao, midika izany fa ho tonga ny marary marobe ary afaka mampitombo ny hopitalinao ianao. Tsy manam-paharoa ny mpiasa rehetra, mampiofana azy ireo hampivelatra ny fahaizany manokana. Mianara manendry ny olona mety aminny toerana mety, mampitombo ny fahombiazanny asa.
Fanavaozana farany: 21-07-2021